12/03/2018 - Page 2 sur 4 -
Fiatrehana ny fiainana : Tanora 400 000 isan-taona miditra amin’ny sehatry ny asa
Mbola betsaka ireo tanora no tsy an’asa eto Madagasikara. 400 000 ka hatramin’ny 500 000 isan-taona ireo tanora miditra amin’ny sehatry ny asa eto amintsika, raha ny tarehimarika avy amin’ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa. …Tohiny
Antohomadinika : Pasitera nifamaly sy nifampikasi-tanana
Tranga tsy dia fahita loatra indray no niseho teny Antohomadinika omaly maraina. Mpitondra fivavahana amina fiangonana zandriny iray eny an-toerana mantsy no nifamaly teny an-dalambe io omaly io, izay nahavory olona maro. Raha ny voalaza …Tohiny
Fifandonana tany Tsiroanomandidy : Olona telo matin’ny dahalo
Sivily miisa telo no indray lavon’ny dahalo vokatry ny fifandonana niseho tany amin’ny fokontany Marofarihy, kaominina Ankerana, distrikan’i Tsiroanomandidy Fihaonana ny alin’ny sabotsy, tokony ho tamin’ny 10 ora. Olona roa tamin’ireo mpanara-dia kosa no naratra …Tohiny
Fitsaram-bahoaka tany Vangaindrano : Lehilahy iray avotry ny zandary
Lehilahy iray antsoina hoe Thierry no avotra soa aman-tsara teny an-tanan’ny fokonolona rehefa niharan’ny fitsaram-bahoaka tao Betsiraha, kaominina Lopary, distrikan’i Vangaindrano ny harivan’ny zoma lasa teo. Namoy ny ainy kosa ny lehilahy iray niaraka taminy, …Tohiny